पिकअप दुर्घटनामा ५ जना घाइते « Farakkon
पिकअप दुर्घटनामा ५ जना घाइते
प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र ३० गते शनिवार
दाङ,चैत ३० । दाङमा शनिवार दिउँसो भएको पिकअप दुर्घटना हुँदा पाँच जना यात्रु घाइते भएका छन् । घाइते मध्य शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ निवासी ३५ बर्षीय पूर्ण परियारलाई बढी चोट लागेको छ । परियारलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको उपचार पछि थप उपचारको लागि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घाइते मध्य अन्य चार जनाको अवस्था भने सामान्ने रहेको प्रहरीले बताएको छ । जिपमा दश जना यात्रु सवार रहेका थिए । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ सुईकोटमा चैते दशैंमा लाग्ने मेला हेरेर फर्कदै गरेको ग १ ज ४९१७ नम्वरको जिप वरालोमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको थियो ।
जिप सुईकोटको भित्रि सडक खण्ड अन्तरर्गत सुन्दरा मन्दिरवाट यात्रु लिएर झर्दै गर्दा सडकदेखि झन्डै २५ मिटर तल खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दिउँसो १ बजेतिर उक्त दुर्घटना भएको थियो । चालकलाई प्रहरी चौकी चिराघाटले नियन्त्रणमा लिएको छ ।